जाडोमा तातो पानी चाहियो- सोलार राख्ने कि इलेक्ट्रिक गिजर? :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
न्यानो सकिएर चिसो सुरू भइसक्यो। काठमाडौंको तापक्रम दिनकै घट्दो पनि छ। पाका उमेरका र केटाकेटीका साथै बिहान-बेलुका दैनिक नुहाउनेलाई चिसो पानी थेग्न अब मुश्किलै हुन्छ। ठिहिर्‍याउने पानीमा भाँडा माझ्न र भान्साको काममा पनि कम्ता सकस हुँदैन।
सधैंभरी पानी भाँडामा उमालेर चलाउन साध्य हुँदैन। त्यसमाथि, हतारमा कता पानी तताएर बस्ने!
पानी तताउन सबभन्दा राम्रो विकल्प भनेको घरमा सोलार प्यानल राख्नु हो।
घामबाट पानी तताउने सोलार एकपटक राखेपछि बिना पैसा, बिना झन्झट पानी तात्छ। धेरै मात्रामा पानी तताउन मिल्ने हुँदा हातमुख धुन, नुहाउन, भान्सामा भाँडा माझ्न र अरू काममा चलाउन मजाले पुग्छ।
सोलार सस्तो र भरपर्दो हुन्छ। जोडिसकेपछि वर्षौंसम्म मर्मतसम्भार गर्नुपर्दैन। सुरूमा जोड्दा अलि खर्च धेरै भएजस्तो लाग्न सक्छ। तर एकपटक जोडेपछि धेरै वर्ष पुग्ने भएकाले सोलार आर्थिक रूपमा फाइदाजनक हुन्छ। सोलारले घामको तापबाट काम गर्ने हुनाले जोडिसकेपछि यसमा थप खर्च लाग्दैन।
तर घरमा कस्तो सोलार राख्ने? यसबारे धेरै जानकारी नहुँदा अधिकांशलाई अलमल भइरहेको हुन्छ।
त्यसैले हामीले विभिन्न किसिमका घरायसी सामान उपलब्ध गराउने एभ्रिघर प्रालिका निर्देशक राजेश ढकाललाई सोलारबारे सोधेका छौं। एभ्रिघरले अल्ट्रासन सोलार बिक्री-वितरण गर्छ। अहिले नेपालमा पाइनेमध्ये सबभन्दा गुणस्तरीय सोलार अल्ट्रासन नै भएको ढकाल बताउँछन्। अल्ट्रासनले बीस वर्षभन्दा धेरै वर्षदेखि सोलार बनाइरहेको छ।
सोलार प्यानलभित्र ट्युबहरू हुन्छन्। यी ट्युबले पानी तताउने काम गर्छन्। अनि ट्युबले दिनभर तताएको पानी ट्यांकीमा गएर जम्मा हुने हो।
ढकालका अनुसार बजारमा पाइने लोकल सोलारमा यस्ता ट्युब आलुमिनियमले बनेका हुन्छन् र बाहिरबाट तामाको लेप मात्र लगाइएको हुन्छ। तर अल्ट्रासनका सोलारका ट्युबहरू पूर्णरूपमा तामाले बनेका हुन्छन्। पूरै तामाले बनेका ट्युबहरूले सोलारको काम गर्ने क्षमता बढाउने उनी बताउँछन्।
'तामाको ट्युब भएका सोलार प्यानलले अर्कोको तुलनामा राम्ररी काम गर्छ। अनि मधुरो घाममा पनि अल्ट्रासन सोलारले राम्ररी पानी तताउन सक्छ,' उनले भने, 'अल्ट्रासनको अर्को फाइदा भनेको ट्यांकी क्षमता लोकल सोलारको भन्दा धेरै छ।'
सोलारमा हामीले हेर्ने भनेको दिनभर तातेको पानी भोलिपल्ट बिहानसम्म तातो रहन्छ कि रहँदैन भन्ने हो। यसमा ट्युबको क्षमतासँगै ट्यांकीको क्षमताले पनि फरक पार्छ। तातेको पानी जति धेरै जम्मा भयो, चलाउन उति धेरै पाइयो।
'अल्ट्रासन सोलारमा पानी तातो राख्ने थर्मस भनौं न, त्यो राम्रो भएकाले बाहिर धेरै चिसो भए पनि तातोपन रहिरहन्छ,' ढकालले भने, 'धेरै चिसोमा पनि दिउँसो तातेको समयको तापक्रमभन्दा दुई-तीन डिग्री मात्रै कम हुन्छ।'
ट्यांकी टिकाउ हिसाबले पनि लोकल सोलारको तुलनामा अल्ट्रासन राम्रो भएको उनी बताउँछन्। लोकल ट्यांकी केही समयपछि चिरिएर, चर्किएर पानी चुहिने समस्या देखिएको उनले बताए।
'हामीले धेरै ठाउँमा यो समस्या देखेका छौं। थुप्रै ग्राहकका घरमा लोकल हटाएर अल्ट्रासन सोलार पनि राखिसक्यौं,' उनले भने।
निर्देशक ढकालका अनुसार अल्ट्रासन ट्यांकी धेरै वर्ष टिक्छ। यसको वारेन्टी नै १५ वर्ष दिइन्छ।
सोलारमा हाइब्रिड प्रणाली पनि हुन्छ। यो भनेको आफूले जोडेको सोलारको क्षमताभन्दा बढी पानी चाहिँदा प्रयोग गर्न सक्ने विद्युतीय उपकरण (रड) हो।
जस्तै, हामीले पाँच जना मान्छेको हिसाब गरेर सोलार जोडेका छौं। तर कहिलेकाहीँ घरमा धेरै मान्छे भए, धेरै पानी चाहियो। यस्तोमा आफूले राखेको ट्यांकीको पानीले नपुग्न सक्छ। यस्तो बेलाका लागि भनेर एउटा विद्युतीय रड राखिएको हुन्छ। यसबाट हामीले थप पानी तताउन सक्छौं र घरका सबैले तातो पानीले नुहाउन सक्नेछन्।
'घरमा कति लिटरको ट्यांकी चाहिन्छ भनेर हामीले परिवारका सदस्य र कतिवटा बाथरूममा प्रयोग गर्ने हो भन्ने बुझेर सुरूमै सुझाएका हुन्छौं,' उनले भने, 'जस्तै चार जना हुनुहुन्छ भने चार सय लिटरको ट्यांकी चाहिँदैन। दुई सय-दुई सय पचासको भए हुन्छ। धेरै मान्छे भएका बेला हाइब्रिड प्रणाली चलाउँदा भइहाल्छ।
हाइब्रिड प्रणालीको अर्को फाइदा लगातार केही दिनसम्म घामै नलाग्दा वा पानी परिरहँदा हुन्छ। यस्तो मौसममा सोलारले तात्नै मौकै नपाउन सक्छ। त्यसैले यस्तो बेलामा रडबाट तताउन सकिन्छ।
अल्ट्रासन सोलार प्रिमियम र रेगुलर गरी दुई प्रकारमा उपलब्ध छन्। प्रिमियमका ट्युबहरू लामा भएकाले धेरै पानी तताउन मद्दत पुग्छ। अल्ट्रासन सोलारमा १५ वर्ष वारेन्टी भएको ढकालले बताए।
एभ्रिघरका निर्देशक ढकालका अनुसार सोलार मर्मतसम्भार गरिरहनुपर्दैन। यो टुट्ने-फुट्ने हुँदैन। तर कहिलेकाहीँ जोडले कुनै सामानले लाग्दा वा खस्दा ट्युबहरू भने फुट्न सक्छन्। त्यसैले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। ट्युब फुटिहाले पनि चिन्ता भने लिनुपर्दैन। किनकी ट्युब सजिलै फेर्न मिल्छ।
'हामी घरमै गएर सोलार फिट गरिदिन्छौं। सोलार एकपटकको लगानीमा धेरै समय चलाउन सकिन्छ,' उनले भने।
ढकालका अनुसार अल्ट्रासन सोलार क्षमता हेरेर ६० हजारदेखि एक लाख २६ हजार रूपैयाँसम्म पर्न आउँछ। घरमा चाहिने अनुसार सोलार जोड्न र अलमल भए सल्लाह लिन पनि उनले सुझाए।
अब सोलार त घर भएकाले राख्ने हो। फ्ल्याट वा कोठामा बस्नेले चाहिँ के गर्ने त?
यसको विकल्प हो इलेक्ट्रिक गिजर अर्थात् बिजुलीबाट चल्ने गिजर। यसमा ग्यास चाहिँदैन र ग्यास गिजरजस्तो जोखिमपूर्ण पनि हुँदैन।
ग्यास गिजर बाल्दा हावा कार्बन-मोनो-अक्साइडयुक्त हुन्छ। यसले गर्दा झ्याल-ढोका लगाएर बाथरूममा लामो समय लगाएर नुहाउनेहरू जोखिममा पर्न सक्छन्।
'ग्यासबाट चल्नेभन्दा बिजुलीबाट चल्ने गिजर धेरै सुरक्षित हुन्छ,' ढकालले भने।
एभ्रिघरले क्रम्पटन कम्पनीको इलेक्ट्रिक गिजर बिक्री-वितरण गर्छ। भारतीय कम्पनी क्रम्पटन घरायसी सामग्रीका लागि लोकप्रिय छ।
'क्रम्पटनका गिजरले कम बिजुली खपत गर्छन् र टिकाउ पनि छन्,' उनले भने।
क्रम्पटन गिजर ३, १०, १५, २५, ३५ र ५० लिटरसम्मका पाइन्छ। आफूलाई आवश्यक भएअनुसार जोड्न सकिन्छ। उनका अनुसार यसको भित्री ट्यांकीमा ५ देखि ७ वर्षसम्मको वारेन्टी हुन्छ।
यसमा धेरै झमेला पनि छैन। बाथरूममा लगेर जोड्यो, बिजुली अन गर्‍यो, चाँडै पानी तातिहाल्छ।
फ्ल्याटमा बस्नेहरूलाई जाडोमा कुचुरकुचुर इलेक्ट्रिक जग वा भाँडामा पानी तताउने सास्तीको विकल्प इलेक्ट्रिक गिजर नै भएको ढकाल बताउँछन्।
भनेका बेलामा तातो पानी त आउने नै भयो, यसको अर्को मुख्य फाइदा भनेको आफू सरेर जाँदा यसलाई निकालेर नयाँ ठाउँमा राख्न सकिन्छ। त्यसैले कहीँ गिजर जोडिसकेपछि त्यहीँ छाडेर जानुपर्‍यो भन्ने चिन्ता हुँदैन।
गिजरको मूल्य भने क्षमता र मोडल हेरेर फरक फरक हुन्छ। क्रम्पटन गिजरको मूल्य लिटर हेरेर करिब १० हजारदेखि ३० हजार रूपैयाँसम्म पर्छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक १०, २०७८, ०२:१४:००
अस्ट्रेलियन कम्पनी 'आइडिपी' किन नेपाल भित्रियो, के-के सुविधा दिन्छ? (भिडिओ)
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य क्यानडा, खर्च कति लाग्छ?
जहाँ २ सयदेखि दस हजारसम्मका जुत्ताचप्पल पाइन्छ (भिडिओ)